မေ လက ဒေါ်လာ ၂ ၇၇ သန်း ရရှိ ခဲ့တဲ့ Buddy နဲ့ Buddy - Pandaily
မေ လက ဒေါ်လာ ၂ ၇၇ သန်း ရရှိ ခဲ့တဲ့ Buddy နဲ့ Buddy
Jun 09, 2022, 15:57ညနေ 2022/06/09 23:26:49 Pandaily
Mobile Application Data Analysis Company Sensor Tower မှ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်မေ လက App Store နှင့် Google Play တို့ မှဒေါ်လာ ၂ ၇၇ သန်းကျော် ရရှိ ခဲ့သည်ဟု ကြာသပတေး နေ့က ပြောဆိုခဲ့သည်။ ယင္း စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလ ကထက္ ၁ ဒသမ ၆ ဆ ျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြ အရ ဂိမ္း မဟုတ္ေသာ မိုဘိုင္း အက္ ပလီ ေကး ရွင္း မ်ားတြင္ ကမၻာ့ နံပါတ္ တစ္ ေနရာ၌ ရပ္တည္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
၀ င်ငွေ၏ ၄၇. ၅% သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တုန်လှုပ် ချောက်ချား ခြင်း၊ ၁၇. ၇% သည် TikTok မှ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အကြီးဆုံး အမေရိကန် ဈေးကွက် မှ ၄% သည် တတိယ အကြီးဆုံး ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ ဈေးကွက် မှဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် YouTube သည် ဝင်ငွ ေဒေါ်လာ ၁၁၉ သန်း နီးပါး ဖြင့် စာရင်း ၏ဒုတိယ နေရာတွင် ရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေလ ကထက် ၁၇. ၆% တိုးလာသည်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန် ဈေးကွက် မှ ၀ င်ငွေ၏ ၄၀. ၁% နှင့် ဂျပန် ဈေးကွက် သည် ၁၉. ၆% ဖြင့် ဒုတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။ Top5ထဲက တျခား App သံုး ခုက Google One, Tinder နဲ႔ Piccom တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ Tencent Video နှင့် Aiqiyi တို့သည် နံပါတ် ၇ နှင့် ၉ တွင်ရှိသည်။
E-commerce နယ်ပယ် ရှိ အချက်အလက် များသည်အလွန် တောက်ပ နေသည်။ ဇွန်လတွင် Shanyin E-Commerce Ecological Conference ၏ဒုတိယ နေ့တွင် Shanyin E-Commerce ဥက္က president ္ဌ က ပလက်ဖောင်း GMV သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၃. ၂ ဆတိုး တက် ခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန် ၁၀ ဘီလီယံကျော် ရောင်းချ ခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤ တိုးတက်မှုနှုန်း က “e-commerce အကျိုးစီးပွား” သည် စားသုံးသူ များ၏ လျှို့ဝှက် လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ရန်နှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း ကိုမြှင့်တင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော e-commerce အမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြီးမားသော စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။